Panama: Nitodika Tamin’ny Vahoaka ny Filoha Martinelli Rehefa Nofoanana ny Lalàna 72 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Oktobra 2012 8:23 GMT
Niezaka nanakatona ny herinandro izay namoizan'ain'olona efatra ny filohan'i Panama, Ricardo Martinelli omaly. Nanao kabary fampihavanana izy izay manasa ireo vahoaka mba hitady fihavanana taorian'ny fifandonana tao Colon nandritra ny hetsi-panoherana ny Lalàna 72. Lalàna manome alalana hivarotra ireo tany miorina ao amin'ny Faritra Afaka (Haba) ao Colon .
Nalefa tao amin'ny fahitalavi-pirenena ao Panama ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny Alahady 28 Septambra, nalefa izany mba ho hitan'ireo vahoaka tsy tafandry mandry manontany izay hambaran'ny filoham-pirenena taorian'ny fahanginany, nisinda izany fahanginana izany rehefa nivoaka ireo sioka roa fohy. Nivoaka ireo sioka ireo nandritra ny fitsidihany ofisialy tao Japana izay nifanindry tamin'ity krizy ity.
Nofehezin'ny habaka Telemetro [es] toy izao ny sombiny tamin'ny kabarin'ny filoha:
“Malahelo aho noho ireo aina nafoy, ireo naratra, sy ireo harena voaroba, mampalahelo satria raha tokony handroso, dia nihemotra isika’ no anisan'ny tenin'ny filoha. Nilaza ihany koa izy fa tsy mba nohazavaina tamin'ny olona ilay lalàna nofoanana. Nanipika izy fa “tsy ny herisetra mihitsy no fomba hamahana ny tsy fitovian-kevitra eo amintsika, ho mahasoa ny firenena sy ny Panameana, tsy tokony hitranga akory izany fifandonana izany “
Filohan'i Panam, Martinelli, tao amin'ny Mpisera Flickr LuisCarlos Diaz, CC BY-NC 2.0
Nandritra ny kabariny, nangataka ny fametraham-pialan'ny filoha ny sasany tamin'ireo Panameana tao amin'ny tambajotra sosialy, raha toa kosa ny sasany namazivazy ny tsy fisian'ny fanaovana azafady, ary ny hafa kosa nahita fa fotoanan'ny fihavanana tokoa izao.
Ho an'i El Joe (@hilmerj28) [es], ohatra, nampianatra lesona ho an'ireo mpanohitra azy ny filoha tamin'ny alalan'ny hafatra fampihavanana ho an'ny Panameana:
@hilmerj28: “@gonzalezbmariac: Hafatra mahafinaritra @rmartinelli manaporofo fampihavanana ho an'i Panama sy ny vahoakan'i Colon ny hafatra!” mampalahelo ireo biby mandady ao amin'ny mpanohitra, sa ahoana hoy ianao?
Saingy ho an'ny hafa kosa, tahaka an'i Zeus Delgarte (@ZeusDelgarte) [es], fohy loatra ny kabary:
@ZeusDelgarte: Tsara tsara kokoa raha misy ny FAMETRAHAM-PIALAN'I MARTINELLI MPANDAINGA
Ho an'i Luis Castillo (@Luis03Castillo) [es] kosa, mitovy tamin'ny kabary nandritra ny krizy tao amin'ny governemanta ny kabary izay meloka avokoa ny rehetra ankoatra ny Governemanta:
@Luis03Castillo: Mitovy ny kabary nampiasany taorian'ny krizin'i Bocas sy Gnobe [vahoaka vazimba teratany] ny kabarin'i @rmartinelli. Nilaza izy ny maraina fa meloka avokoa ny rehetra, ankoatra azy ireo [governemanta].
Nahita kosa ny Minisitry ny Presidenza Roberto Henriquez (@RCHENRIQUEZ) [es] fa mahitsy ny kabariny ary mitondra fampihavanana:
@RCHENRIQUEZ: Nofoanana ny lalàna 72. Kabary voalanjalanja sady mahitsy no nataon'ny filoha Martinelli. Ankehitriny, andeha hametraka fifampiresahana isika miaraka amin'ny mpitondra monisipaly ao Colon.
Mifanohitra amin'izany, depiote mpanohitra Beby Valderrama (@BebyValderrama) [es] nihevitra fa fomba iray fialàn'ny Governemanta bala amin'ny olana sy ialàna amin'ny fanaovana azafady ny kabary.
@BebyValderrama: 9 andro, 192 ora, 11.520 minitra ary 691.200 segondra 4 namoy ny ainy, 42 naratra ary tao anatin'ny 5 minitra, mikendry handoto ny rehetra izy fa tsy hanao azafady
Na dia niantso ho amin'ny fampihavanana aza ny kabary, nifanipaka sy nifampihantsy ady ny fanehoan-kevitra tao amin'ny tambajotra sosialy. Angamba mbola tsy hifarana eto ny vaovao rentsika mikasika ity lalàna mampiady hevitra ity.